ပြည်ထောင်စု သစ္စာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြည်ထောင်စု သစ္စာ သည် ၂၀၁၇ ခုထွက် မြန်မာ ရုပ်သံဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ (၇၂) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်အဖြစ် ရိုက်ကူးကာ တပ်မတော်ပိုင် မြဝတီရုပ်သံလိုင်းတို့မှ ၂၀၁၇ ခု၊ မတ်လ ၂၄၊ ၂၅ နှင့် ၂၆ ရက်တို့တွင် ခွဲလွှင့်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ မုန်းကိုးဒေသရှိ တပ်မတော် တပ်စုတစ်စုနှင့် ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (MNDAA) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပုံကို အခြေခံရိုက်ကူးခြင်း ဖြစ်သည်။
ရိုက်ကွင်းတာဝန်ခံမှာ ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်ချိုဖြစ်သည်။ မင်းခိုက်စိုးစန် ဇာတ်ညွှန်းရေးကာ ဝေဠုကျော် အနုပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးသည်။ ဒါရိုက်တာမှာ ဗိုလ်မှူး တင်အောင်စိုး ဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင်များအနေဖြင့် နေမင်း၊ ကောင်းခန့်၊ မိုးဇက်၊ မေသဉ္ဇာဦး၊ မေဘရဏီသော်၊ မေကဗျာဦး၊ ထူးခန့်ကျော်၊ ပြည့်စုံမင်းနှင့် ကျော်ရဲအောင်တို့ ပါဝင်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအပိုင်း ထုတ်လွှင့်မည့် မတ်လ ၂၆ ရက်တွင် The Voice Daily သတင်းစာ၌ ဇာတ်ကားပါ စာသားများကို သရော်ထားသည့် ကျည်ထောင်စု သစ္စာ ဆောင်းပါး ပါလာသည်။ ထိုဆောင်းပါးအား တပ်မတော်မှ ကန့်ကွက်စာထုတ်၍ အယ်ဒီတာချုပ် ကျော်မင်းဆွေနှင့် စာရေးသူ ဗြိတိသျှ ကိုကိုမောင် ကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) နှင့် တရားစွဲသည်။  ဗြိတိသျှ ကိုကိုမောင်ကို ဒုတိယမြောက် ရုံးထုတ်အပြီး ဇွန်လ ၁၆ ရက်တွင် တရားသေ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ အယ်ဒီတာ ဦးကျော်မင်းဆွေကို ကိုးကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်အပြီးတွင် ဗဟန်းတရားကိုက ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျပ် သိန်း ၁၀၀ နှင့် အာမခံပေးသည်။ 
↑ "ကျည်ထောင်စုသစ္စာ ရေးသူနဲ့ အယ်ဒီတာ အမှုဖွင့်ခံရ"။ ဘီဘီစီ။ ၂၀၁၇၊ မေ ၁၇။
↑ "The Voice အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေ ကျပ် သိန်း ၁၀၀ နဲ့ အာမခံရ". MCN TV.4Aug 2017.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြည်ထောင်စု_သစ္စာ&oldid=477829" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၀:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။